DAS စျေး - အွန်လိုင်း DAS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို DAS (DAS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ DAS (DAS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ DAS ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ DAS တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
DAS များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DASDAS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0211DASDAS သို့ ယူရိုEUR€0.0178DASDAS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0161DASDAS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0192DASDAS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.191DASDAS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.133DASDAS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.466DASDAS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0784DASDAS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.028DASDAS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0294DASDAS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.478DASDAS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.163DASDAS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.111DASDAS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.58DASDAS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.51DASDAS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0289DASDAS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0318DASDAS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.653DASDAS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.147DASDAS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.22DASDAS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩25.12DASDAS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦7.99DASDAS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.55DASDAS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.585
DASDAS သို့ BitcoinBTC0.000002 DASDAS သို့ EthereumETH0.00005 DASDAS သို့ LitecoinLTC0.000365 DASDAS သို့ DigitalCashDASH0.000243 DASDAS သို့ MoneroXMR0.000242 DASDAS သို့ NxtNXT1.75 DASDAS သို့ Ethereum ClassicETC0.00295 DASDAS သို့ DogecoinDOGE6.03 DASDAS သို့ ZCashZEC0.000254 DASDAS သို့ BitsharesBTS0.806 DASDAS သို့ DigiByteDGB0.804 DASDAS သို့ RippleXRP0.0701 DASDAS သို့ BitcoinDarkBTCD0.000744 DASDAS သို့ PeerCoinPPC0.0763 DASDAS သို့ CraigsCoinCRAIG9.84 DASDAS သို့ BitstakeXBS0.921 DASDAS သို့ PayCoinXPY0.377 DASDAS သို့ ProsperCoinPRC2.71 DASDAS သို့ YbCoinYBC0.00001 DASDAS သို့ DarkKushDANK6.93 DASDAS သို့ GiveCoinGIVE46.75 DASDAS သို့ KoboCoinKOBO4.92 DASDAS သို့ DarkTokenDT0.0194 DASDAS သို့ CETUS CoinCETI62.33